ကြောင်ကလေး ရေနစ်နေတာမြင်တော့၊ ဝှီးချဲပေါ်က ခက်ခက်ခဲခဲဆင်းပြီး ကယ်ခဲ့သူ(ရုပ်သံ)
Pop Pin New August 16, 2019
ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ (၁၁)ရက်နေ့က Abu Fathiyyaturahma Menk Abdun Mujtahid အမည်ရ အမျိုးသားဟာ သူ ကြောင်ကလေးကို ခက်ခက်ခဲခဲ ကယ်တင်ခဲ့ပုံ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းကို လူမှုကွန်ရက်မှာ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ Abu ဟာ အများမြင်တဲ့အတိုင်း သူကိုယ်တိုင်က မသန်စွမ်းတစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ ခြေထောက်အောက်ပိုင်း ပြတ်တောက်နေသူဖြစ်ပြီး၊ ဝှီးချဲကို မဖြစ်မနေ အသုံးပြုနေရသူပါ။ သူဟာ …
တပ်မတော်ကို စိန်ခေါ်တိုက်ခိုက်သည့်အတွက် တပ်မတော်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လိမ့်မည်
တပ်မတော်ကို စိန်ခေါ်တိုက်ခိုက်သည့်အတွက် တပ်မတော်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လိမ့်မည် ပြင်ဦးလွင်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအလားအလာ ပြင်ဦးလွင်မြို့က တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ နောင်ချိုနဲ့ကျောက်မဲမြို့တွေက စစ်ဆေးရေး ဂိတ်တွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့က တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက် တပ်မတော်သားနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ တပ်မတော်ဘက်က တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ပေးဖို့ မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အခုလို တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာတာပါ။ ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့် တပ်မတော်အနေနဲ့ …
ဒီနယ်မြေအတွင်းမှာ နည်းနည်းတော့ကြမ်းမယ်ဗျာ…… ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း….. နောင်ချို မိုးကုတ် မိုးမိတ် မိုင်းလုံ သီပေါ နမ့်မတူ ကျောက်မဲ……. ဒီနယ်မြေအတွင်းမှာ နည်းနည်းတော့ကြမ်းမယ်…. ရမ်းကားတာမဟုတ်….လွမ်းစရာစကားတွေလာမပြောနဲ့…. စစ်သား တာဝန်ချိန်မှာ…..စစ်ဆင်ရေးကာလမှာ မလွမ်းတတ်ဘူး…. နောက်နေ့….အာရုံအတက် နေအထွက်မှာ ခွေးအသေကောင်… ခွေးအရှင်ကောင် ဘယ်နစ်ကောင်ရမလည်းကြည့်ထား…. တရုတ်ပြည်မကူးဘို့ ကအဓိက…..။Heinn Htet အခု ညနေ ၄း၀၀ အချိန်အထိ … …
သြဂုတ်လ(၁၅) ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပြင်ဦးလွင် နောင်ချို တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွင် ပြင်ဦးလွင်ရှိ တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်တွင် ပစ်ခတ်ရန် စီစဉ်ထားသည့် ရှော့တိုက်ဒုံးများ တွေ့ရှိရကြောင်းသိရသည်။ ၄င်း တိုက်ခိုက်မှုတွင် တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်အပါအ၀င် ပြင်ဦးလွင်နှင့် နောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းရှိ တပ်နှင့် စစ်ဆေးရေးဂိတ်များအား တအာင်းအဖွဲ့(TNLA)၊ ရခိုင်အဖွဲ့(AA)၊ ကိုးကန့်အဖွဲ့(MNDAA) တို့က ပူးပေါင်း တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြည်ဦးလွင်မြို့နယ် မြို့ရှောင်လမ်းအနီးရှိ တောင်ကုန်းတစ်ခုတွင် ပစ်ခတ်ရန် စီစဉ်ထားသည့် …
အရုပ်မလေးလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးကြောင့်ရော၊ အဆိုပိုင်းမှာလည်း ထူးချွန်တာကြောင့်ပါ ပရိသတ်တွေရဲ့အာရုံစိုက်ခြင်းကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေး နန်းဆုရတီစိုးကတော့ အများက အားကျရတဲ့ အချစ်ရေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ဦးပါ။ ဒီနေ့လေးမှာတော့ နန်းဆုက ပရိသတ်တွေ စိတ်ပူရလောက်တဲ့အထိ ဖြစ်နေတဲ့ အချစ်ရေးအခြေအနေကို ထုတ်ပြောလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ အမြဲအားကျနေရတဲ့ စုံတွဲလေးမို့ ပရိသတ်တွေကလည်း သို့လော၊ သို့လောနဲ့ အရမ်း စိတ်ပူနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ …
ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက် ဆန်အိတ်အလုံးရေ (၁၀၀) လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် ဒေါင်း
မွန်ပြည်နယ်က ရေဘေးဒုက္ခတွေက ပရိသတ်တွေကြားမှာ မကြားချင်လောက်အောင် ရင်နင့်စရာကောင်းတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ဒီသတင်းကြောင့် ပြည်သူတွေနဲ့ အနုပညာရှင်ညီအကိုမောင်နှမတွေက ပဋ္ဌာန်းရွက်ပူဇော်ကာ ဆုတောင်မေတ္တာတွေပို့သပေးခြင်း၊ သွားရောက်ပြီးစားစရာတွေလှူဒါန်းပေးခြင်း၊ ကယ်ဆယ်မှုတွေပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ ဒေါင်းကလည်း မွန်ပြည်နယ်မှာ အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် ဦးကျော်သူနာရေးကူညီမှုအသင်းကနေတစ်ဆင့်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ ဒေါင်းကတော့ ပရိသတ်သဲသဲလှုပ်ချစ်တာကို ခံနေရတဲ့ မင်းသားတစ်လက်ပါ။”လိပ်ပြာစံအိမ်”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကနေ ပရိသတ်အားပေးမှုကို စတင်ရရှိထားတဲ့ သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ကရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ “ဒဏ္ဍာရီမိုး”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ရဲတိုက်၊အကယ်ဒမီဝတ်မှုံရွှေရည်၊ရွှေထူးတို့နဲ့အတူ ဒေါင်းက ဗီလိန်နေရာကနေ …
“ဝ”တယ် ပြောလို့ ရည်းစားကို လမ်းမပေါ်တင် ကတ်ကြေးနဲ့ ထိုးသတ်
အမျိုးသမီးထုကြီးအတွက် စိတ်အနာဆုံး စကားကတော့ သူတို့ကို “ဝ”တယ်လို့ တစ်ယောက်ယောက်က ပြောလိုက်တာပါပဲ။ အပြုသဘောနဲ့ဖြစ်စေ၊ စေတနာနဲ့ဖြစ်စေ “ဝ”တယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သူတို့လုံးဝ ခံနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သူတို့မကြားချင်ဆုံး စကားတစ်ခွန်းလဲဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက “ဝ”တယ် လို့ ပြောမိတဲ့ ချစ်သူရည်စား ကောင်လေးကို မိန်းကလေးက လမ်းမအလယ်မှာ ကတ်ကြေးနဲ့ မသေမချင် ထိုးသတ်ခဲ့မှု သြဂုတ်လ …
ကိုရင်လေးတစ်ပါးရဲ့ အဖေနာမည်ကို ကြည့်လိုက်မိတယ်အခါ အဖအမည် “ဦးသာသန” တဲ့။
ကိုရင်လေးတွေကို ဆေးမှတ်တမ်းအလိုက်ဆေးတိုက်ရင်း အမှတ်မထင် ကိုရင်လေးတစ်ပါးရဲ့ အဖေနာမည်ကို ကြည့်လိုက်မိတယ်။ အဖအမည် “ဦးသာသန” တဲ့။ ဆေးမှတ်တန်းရေးတဲ့ ဆရာမက ဦးသာသနဆိုတာ လူနာမည်ထင်နေပုံရတယ်။ ဦးသာသန ဆိုတာ အလင်းစစ်ကျောင်းရဲ့ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်ဘွဲ့နာမည်ပါ​။ “ဒီကိုရင်လေးလုပ်ပြန်ပြီ” လို့တွေးရင်း ပြုံးမိတယ်။ အပြုံးရဲ့နောက်မှာ စိတ်မကောင်းရခြင်းတွေကလည်း ကပ်ပါလာလို့ ကြာကြာမပြုံးနိုင်လိုက်​ပါဘူး။ စာသင်ပေးရင်း ကိုရင်လေးတွေကို ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် မိတ်ဆက်ပြေားခိုင်းထားလို့ …
မြေပြိုပိလို့ အသက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ သားအမိ ဝင်ပူး သဲဖြူကုန်းမှာ ရေဘေးရှောင်ဖို့ တောင်ပေါ်ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားမှာ နေရင်း တောင်ပြိုပိပြီး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ မိခင် မအေးအေးထွန်းနဲ့ ၁နှစ်ခွဲအရွယ်ရှိ သားဖြစ်သူ မောင်လင်းခန့်ဟိန်း ရှေ့က လက်အုပ်ချီထားတာက မိခင် ဝင်ပူးနေတာဖြစ်ပြီး နောက်က ဖက်ထားတာက သားငယ်လေး ဝင်ပူးနေတာပါ။ သူတို့ ဘုရားမှာ နေနေရပါတယ် တဲ့။ သားအမိနှစ်ယောက် အတူမနေရလို့ပါတဲ့။ …
ရပ်ကွက်ထဲက မရှိဆင်းရဲသားတွေဆီကို ကားလေးတစ်စီးနဲ့ သွားရောက်ပြီး အခမဲ့ ဆေးကုသပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ဦ
ဒေါက်​တာ ​နေစိုး​မောင်​ ဟာ ရပ်ကွက်ထဲက မရှိဆင်းရဲသားတွေဆီကို ကားလေးတစ်စီးနဲ့ သွာရောက်ပြီး ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ အခမဲ့ ဆေးကုသပေးနေတယ် လို့ သိရပါတယ် ….အသက်(၆၀)ကျော်ပင်စင်ယူပြီးလို့အားလပ်ချိန်တွေမှာဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်ပေးနေတာအလွန်လေးစားဘို့ကောင်းပါတယ်… ကိုယ်တိုင်ကကူညီပေးလို့ရတဲ့ပညာရှိနေခြင်း..ငွေကြေးအတွက်စိတ်ပူရန်မလိုခြင်း..အချိန်ပိုရှိနေခြင်း..စိတ်စေတနာကောင်းမွန်ခြင်း..ငွေကြေးအရဘဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်အရဘဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးကုရန်ခက်ခဲနေသူများအပေါ်ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိခြင်း ဒါတွေကြောင့်ယခုလိုလုပ်နိုင်တာပါ..ဘဝကိုခက်ခဲပင်ပန်းစွာဖြတ်သန်းရင်းမိသားစုအတွက်အလုပ်တွေလုပ်နေရလို့မိမိကျန်းမာရေးကိုအလေးမပေးနိုင်သူများအတွက်တန်ဘိုးအလွန်ရှိလှပါတယ်.. ဘဝမှာပြည့်စုံတယ်ဆိုတာငွေကြေးချမ်းသာတာထက်ဒါမျိုးလုပ်ပေးနိုင်သူများကိုဆိုလိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်.. (((( ဆေးခန်းကို ကားပေါ်တင်၊ ကားဝင်လို့ရတဲ့ ပျံကျ ရပ်ကွက်တွေကို သွားပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုး​ကြောင့် ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်း မလာနိုင်တဲ့ လူနာ​တွေကို …